बुद्ध गोल्डकप फुटबल २० वर्षपछि सुरु हुँदै
नेपाल लाइभ सोमबार, फागुन १२, २०७६, १३:१७
भैरहवा- भैरहवाको पहिचानको रुपमा रहेको महात्मा बुद्ध गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता दुई दशकपछि हुने भएको छ।
विगत २० वर्षदेखि आर्थिकलगाएतका कारण आयोजना हुन नसकेको महात्मा बुद्ध गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताले यस वर्षदेखि निरन्तरता पाउने भएको छ। २०५५ सालसम्म निरन्तर आयोजना हुँदै आएको प्रतियोगिता त्यसपछि रोकिएको थियो।
सिद्धार्थनगर नगरपालिका भैरहवा तथा प्रफेक्ट स्क्वायड प्रालिको संयुक्त आयोजनामा आगामी चैत २ गतेदेखि भैरहवास्थित संघीय प्रहरी इकाई कार्यालयको खेलमैदानमा प्रतियोगिता हुन लागेकाे हाे। आयोजकले सोमबार भैरहवामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रतियोगिताबारे जानकारी गराएका हुन्।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले २० वर्षदेखि आयोजना हुन नसकेको प्रतियोगितालाई पुनःजीवन प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने नगरपालिकाको धारणाअनुसार प्रतियोगिता सुरु गर्न लागिएको बताए। उनले प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि गत वर्षको बजेट निर्माणकै क्रममा बजेट विनियोजन गरिएको बताए। उनले प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न करिब ६५ लाख रुपैयाँ लाग्ने र खर्च व्यवस्थापनमा संरक्षक तथा व्यवस्थापकको रुपमा रहेको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने जानकारी दिए। बाँकी रकम अर्को आयोजक संस्था प्रफेक्ट इभेन्ट स्क्वायड प्रालिले जुटाउने र आर्थिक श्रोत जुटाउन नगरपालिकाले समेत पहल गर्ने नगरप्रमुख अधिकारीले बताए।
प्रदेश ५ सरकारको जारी लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ र नेपाल सरकारको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० पनि सुरु भइसकेको सन्दर्भमा प्रतियोगिताले नगरलाई थप चर्चामा ल्याउने उनले बताए। 'फुटबलको माध्यमबाट भविष्यमा सिद्धार्थनगरलाई खेलकुदको सहरको रुपमा पनि विकसित गर्दै बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउन मद्दत पुग्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ,' उनले भने।
विश्वमा भगवान गौतमबुद्धको नामसँग जोडिएर आयोजना गरिएको महात्मा बुद्ध गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता नै पहिलो फुटबल प्रतियोगिता भएको उनको भनाइ छ। प्रतियोगिता अब प्रत्यक वर्ष सञ्चालनमा आउने र त्यसका लागि नगरपालिकाले बजेटको व्यवस्थापन गर्ने नगर प्रमुख अधिकारीको दावी छ।
प्रतियोगितामा आयोजक टिमसहित भारत र नेपालका प्रतिष्ठित क्लब गरी ८ वटा टिमको सहभागिता रहने प्रफेक्ट इभेन्ट स्क्वायड प्रालिका सचिव रोशनसिंह खड्काले बताए। प्रतियोगितामा विजेताले ५ लाख, उपविजेताले ३ लाख तथा उत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट गोल रक्षक, उत्कृष्ट मिडफिल्डर र सर्वाधिक गोलकर्ता घोषित गरी पुरस्कृत गरिने उनले बताए।
प्रतियोगितामा सहभागी हुने टिमलाई २५ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तोकिएको छ। त्यस्तै खेलको अवलोकन गर्न आउने दर्शकको लागि प्रथम चरणमा रु. एक सय, दोस्रो चरणमा दुई सय र सबै खेलको एकमुष्ठ रु. एक हजार टिकट शुल्क तोकिएको छ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनशील लम्सालको स्वागत तथा वरिष्ठ अधिकृत गणेशबहादुर क्षेत्रीको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।
सुरुको अवस्थामा अञ्चलपुर युवा क्लबबाट सञ्चालित हुँदै आएको र विसं २०४२ साल पश्चात सिद्धार्थनगर नगर पञ्चायतको पहलमा सोही कपलाई स्तरवृद्धि गरी महात्मा बुद्ध गोल्डकपको रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो।